ReachEdge Ukusiza Amabhizinisi Endawo Ukuthola Amakhasimende Angaphezulu | Martech Zone
ReachEdge ukusiza amabhizinisi endawo ukuthi athole amakhasimende amaningi
NgoLwesithathu, Septemba 25, 2013 UMsombuluko, May 4, 2015 Douglas Karr
Amabhizinisi endawo alahlekelwa cishe amakota amathathu okuhola kwawo ngenxa yokuvuza kwinqubo yawo yokuthengisa nokumaketha. Noma bephumelele ekufinyeleleni abathengi ku-inthanethi, amabhizinisi amaningi awanayo iwebhusayithi eyakhelwe ukuguqula umkhondo, ungalandeli umkhondo ngokushesha noma njalo, futhi awazi ukuthi iyiphi imithombo yabo yokuthengisa esebenzayo.
I-ReachEdge, uhlelo lokumaketha oluhlanganisiwe oluvela kwaReachLocal, lusiza amabhizinisi aqede lokhu kuvuza okubizayo kwezimakethe futhi aqhube amakhasimende amaningi ngomsele wawo wokuthengisa. Ngalolu hlelo, amabhizinisi anamathuluzi nokusekelwa abakudingayo ukuthola i-ROI ethe xaxa ekusetshenzisweni kwabo kokuthengisa.
I-ReachEdge yenza zonke izinqubo zokumaketha zizenze izingxenye ezintathu eziyinhloko: iwebhusayithi ehlakaniphile, isoftware ezenzakalelayo yokulawulwa kokuhola, kanye nohlelo lokusebenza olunamandla lweselula olusebenzisana ukuguqula amathemba abe ngamakhasimende.
I-ReachEdge isoftware isiza amabhizinisi endawo ukuthi abambe imikhondo eminingi, ayiguqulele kumakhasimende futhi aqonde ukuthi imaphi amaqhinga wokumaketha akhiqiza imikhondo / amakhasimende amaningi ne-ROI. Izici zayo ezibalulekile zifaka:
Ukuhola nokushayela ucingo ubuchwepheshe thatha ukuhola ngomthombo wokumaketha; iqopha izingcingo futhi ivumele amabhizinisi ukuthi azidlale futhi, azilinganise futhi aphendule kumikhombandlela; kwakha uhlu lokuhola olubekwe eqhulwini olugcina imininingwane yokuxhumana efana negama, ikheli le-imeyili, indawo yebhizinisi, inombolo yocingo, usuku nesikhathi sokushaya ucingo, nokushayela ukurekhoda koxhumana naye ngamunye; futhi ilandelela imiphumela evela emikhankasweni yeReachLocal kanye ne non-ReachLocal.
Uhlelo lokusebenza leselula kanye nezixwayiso ezazisa amabhizinisi isikhathi ngasinye lapho bethola oxhumana nabo abasha kusuka kusayithi labo; ihlela futhi iholele imizila ngokuya ngejografi, ihhovisi kanye / noma nomsebenzi; inikeza umbiko wesifinyezo wangaphakathi nohlelo wemithombo ephezulu yokuhola nezinga lokuzibandakanya ngemikhondo emisha; kuvumela amabhizinisi ukuthi abuke uhlu lokuhola olubekwe phambili, abuyekeze imininingwane yokuxhumana, alalele izingcingo ezirekhodiwe futhi ahlukanise oxhumana nabo ngamaqembu; futhi inikezela ngokuhlukaniswa okukodwa kwemikhondo emisha eqala ama-imeyili wokukhulisa abahola phambili kanye nezaziso zokulandela abasebenzi.
Izaziso zokuhola nokukhulisa ezinikezela ngezaziso zeselula (ze-SMS neze-in-app) ukukhumbuza abanikazi bamabhizinisi nabasebenzi ukuthi balandele umkhondo; i-imeyili yokugaya nsuku zonke yabo bonke oxhumana nabo abasha nemikhondo ephezulu; kanye nochungechunge lwama-imeyili wokumaketha azenzakalelayo asiza amabhizinisi ukuthi ahlale phambi kwemikhondo yawo.
Imibiko ye-ROI nokuqonda enikezela ukutholakala okungu-24/7 kumabhizinisi nge-portal yabo yewebhu kanye nohlelo lokusebenza lweselula; imibiko yomthombo ekhombisa imithombo yezentengiso yokuvakasha, oxhumana nabo nemikhombandlela; ukubuka umugqa wesikhathi kwabo bonke oxhumana nabo abasha, kufaka phakathi ukuthi kuthunyelwe nini ucingo ngalunye, i-imeyili noma ifomu lewebhu; imibiko yethrendi ekhombisa ngqo izinsuku nezikhathi oxhumana nabo abakhona ngazo imibiko yokuzibandakanya ekhombisa ukuthi amabhizinisi aguqula kanjani oxhumana nabo abasha abahola phambili namakhasimende; futhi kulinganiselwa imali engenayo yamakhasimende ekhombisa amabhizinisi i-ROI yawo yokumaketha.
Ochwepheshe bezokukhangisa abavela kuReachLocal enikezela ukusethwa okuphelele kwesoftware yeReachEdge nokuhlanganiswa namawebhusayithi webhizinisi; ukusethwa kanye nokumiswa kwezaziso ezintsha zokuxhumana nezaziso zabasebenzi; ukusethwa kwempendulo yokuxhumana okuzenzakalelayo nokuhola ama-imeyili wokukhulisa; kanye nokubuyekezwa kwemibiko nezincomo zokwenza ngcono ukusebenza kwewebhusayithi nokuthengisa online.
Isinyathelo sethu sokwenza iReachEdge itholakale kunoma iyiphi iwebhusayithi siyingxenye yecebo elikhudlwana lokuqinisekisa ukuthi ukumaketha oku-inthanethi kutholakala kalula, kusobala futhi kulula kumabhizinisi endawo. USharon Rowlands, isikhulu esiphezulu, ReachLocal
I-ReachLocal, Inc. isiza amabhizinisi endawo ukuthi akhule futhi asebenze ibhizinisi lawo kangcono ngobuchwepheshe obuholayo nensizakalo yochwepheshe bokukhiqiza nokuguqulwa kwamakhasimende abo. I-ReachLocal izinze eWoodland Hills, eCalif futhi isebenza ezifundeni ezine: i-Asia-Pacific, iYurophu, iLatin America neNyakatho Melika.
Tags: yezimotoukunakekela impiloimisebenzi yasekhayangaphakathiwendawoibhizinisi lendawoukumaketha kwendawoUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiiwebhusayithi ehambayoimisebenzi yobungcwetiukufinyelelamandlaukumaketha kwesifundaamasevisi okukhethekile
I-AddShoppers: Ipulatifomu Yezinhlelo Zokusebenza Komphakathi
Izinyathelo ezibonakalayo: Amavidiyo nemidiya ezuziwe